Ahoana ny fomba hisafidianana loharano misy rano tsara biby?
Voamarikao ve fa toa tsy tia rano fisotro ny saka anao? Izany dia satria ny razamben'ny saka dia avy any an'efitra Egypt, noho izany ny saka dia miankina amin'ny sakafo ho an'ny hydration fa tsy misotro mivantana. Araka ny siansa, ny saka dia tokony hisotro rano 40-50ml isaky ny kilao amin'ny lanjan'ny vatana isan'andro. Raha misotro kely ny saka dia ho mavo ny urine ary ho maina ny fivalanana. Matotra tokoa dia hampitombo ny vesatry ny voa, ny vato voa sns. (Ny inci ...
Fandraisana an-trano sy IoT: Ny vintana sy ny vinavinan'ny tsena 2016-2021
(Fanamarihan'ny Editor: Ity lahatsoratra ity, nadika avy amin'ny ZigBee Resource Guide.) Ny fikarohana sy ny tsena dia nanambara ny fanampiana ny tatitra «Connected Home and Smart Appliances 2016-2021 to ho an'ny fanoloran'izy ireo. Ity fikarohana ity dia manombatombana ny tsenan'ny Internet of Things (IoT) ao amin'ny Connected Homes ary misy ny fanombanana ireo mpamily tsena, orinasa, vahaolana ary ny vinavina 2015 ka hatramin'ny 2020. Ity fikarohana ity dia manombana ihany koa ny tsenan'ny Smart Appliance ao anatin'izany ny teknolojia, orinasa, vahaolana ...
OWON dia mpanamboatra matihanina ho an'ny vokatra sy vahaolana Smart Home. Niorina tamin'ny taona 1993, OWON dia nanjary mpitarika ny indostrian'ny Smart Home manerantany miaraka amin'ny hery R&D matanjaka, katalaogim-bokatra complte ary rafitra mifangaro. Ny vokatra sy ny vahaolana amin'izao fotoana izao dia mandrakotra karazana maro, ao anatin'izany ny Fanaraha-maso angovo, Fanaraha-maso jiro, Fanaraha-maso ny fiarovana ary maro hafa. OWON dia manasongadina vahaolana farany na farany, anisan'izany ny fitaovana marani-tsaina, vavahady (hub) ary mpizara rahona. Ity arkitekista mihombo ...
OWON ao amin'ny fampirantiana iraisam-pirenena ho an'ny biby fiompy ho an'ny tany Sina (Shenzhen)
Ny fampirantiana iraisam-pirenena ho an'ny biby fiompy sinoa (Shenzhen) faha-7 dia fampiratiana matihanina noforonin'i HONOR TIMES. Taorian'ny fanangonana sy rotsakorana an-taonany maro, dia nanjary fampirantiana ho an'ny indostria lehibe indrindra sy manan-kery indrindra ao Shina. Nanangana fiaraha-miasa stratejika maharitra miaraka amin'ny marika an-trano sy vahiny an-jatony fanta-daza ny Shenzhen Pet Fair mba hiantohana ny kalitaon'ny fampirantiana, toa ny ROTAL CANIN, NOURSE, HELLOJOY IN-PLUS, PEIDI, CHINA PET DOODS, HAGEN NUTRIENC .. .
OWON dia ao amin'ny The China China (Shenzhen) International Pet supplies Exhibition
Ny fampirantiana iraisam-pirenena ho an'ny biby fiompy (China) Shenzhen faha-7 (2021/4 / 15-18) Convention Center sy Exhibition Center (Distrikan'i Futian) Xiamen OWON Technology Co., Ltd. Laharana fampirantiana: 9E-7C Manasa am-pahatsorana ireo varotra sy namana eran-tany izahay hitsidika, ary mitady ny fotoana ahafahana miara-miasa!
(Fanamarihan'ny Editor: Ity lahatsoratra ity, nadika avy amin'ny ZigBee Resource Guide · Fanontana 2016-2017.) Ny Zigbee 3.0 dia ny fampiraisana ireo fenitra tsy misy tariby izay tarihan'ny Alliance ho vahaolana tokana ho an'ny tsena sy appliations mitsivalana rehetra. Ny vahaolana dia manome interoperability mirindra eo amin'ny isan-karazany ny fitaovana marani-tsaina ary manome ny mpanjifa sy ny orinasa fidirana amin'ny vokatra sy serivisy manavao izay miara-miasa mba hanana fiainana andavanandro. Ny vahaolana ZigBee 3.0 dia namboarina ...
ZigBee, ny IoT ary ny Fivoarana Manerantany
(Fanamarihan'ny Editor: Ity lahatsoratra ity, nadika avy amin'ny ZigBee Resource Guide.) Tahaka ny efa nambaran'ny mpanadihady marobe, tonga ny Internet of Things (IoT), vina iray izay nofinofisin'ny mpitia teknolojia na aiza na aiza. Ny orinasa sy ny mpanjifa dia mahatsikaritra haingana; manamarina ireo vokatra an-jatony izay milaza ho “marani-tsaina” namboarina ho an'ny trano, orinasa, mpivarotra, enti-miasa, fambolena izy ireo - mitohy ny lisitra. Miomana mialoha izao tontolo izao ...
Mitondra ny làlana miaraka amin'ny vokatra azo iaraha-miasa
Ny fenitra misokatra dia tsara ihany amin'ny fifandraisan'ny samy hafa ny vokatra vokariny eo amin'ny tsena. Ny ZigBee Certified Program dia noforonina miaraka amin'ny iraka hanomezana fomba feno sy feno ary feno izay manamarina ny fampiharana ny fenitra ao aminy ho an'ireo vokatra efa an-tsena mba hiantohana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny vokatra mitovy amin'ny voamarina. Ny programa dia mitrandraka ny fahaiza-manaon'ny lisitry ny orinasa 400+ memeber hampivelatra andiany feno sy feno ...
Maninona no mampiasa Zigbee amin'ny vahaolana IOT Wireless-nao?
Quation tsara kokoa dia, maninona? Fantatrao ve fa ny Zigbee Alliance dia manamboatra famaritana, fenitra ary vahaolana tsy misy tariby ho an'ny fifandraisana an-tariby IoT? Ireo fari-pitsipika, fenitra ary vahaolana ireo dia mampiasa ny fenitra IEEE 802.15.4 ho an'ny fidirana fivoahana sy haino aman-jery (PHY / MAC) miaraka amin'ny fanohanan'ny tarika 2.4GHz manerantany sy ny tarika ambanin'ny faritra GHz. Mpanome transceiver sy modules mifanaraka amin'ny IEEE 802.15.4 azo zahana 20 mahery ...
Serivisy ODM feno fonosana hahatratrarana ny tanjon'ny orinasa
Momba ny OWON OWON Technology (ampahany ao amin'ny LILLIPUT Group) dia ISO 9001: 2008 mpanamboatra endrika voamarina tamin'ny famolavolana sy famokarana vokatra mifandraika amin'ny elektronika sy solosaina nanomboka tamin'ny 1993. Notohanan'ny fototra mafy orina amin'ny teknolojia fampiratiana solosaina sy LCD, ary avy amin'i fiaraha-miasa amin'ireo mpilalao indostrialy lehibe, ny OWON dia mampiditra ny teknolojia IOT ao anatin'ny fifangaroan'ny haitao, izay manolotra ireo vokatra namboarina sy ireo vahaolana namboarina ho an'ny uili ...
Ny rafitra an-trano Zigbee Smart Home feno
Amin'ny maha-mpamatsy lozisialy fitaovana an-trano sy vahaolana maivana an'i ZigBee dia mino i OWON fa rehefa misy "zavatra" maro mifandraika amin'ny IoT, dia hitombo ny sandan'ny rafitra an-trano. Io finoana io dia nampirongatra ny fanirianay hamolavola karazana vokatra maherin'ny 200 an'ny ZigBee. Manarona ny rafitra an-trano marani-tsaina OWON: Fitantanana jiro fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny fitaovana ao an-trano Fandriampahalemana IP fakan-tsary ho an'ny loholona IP fakana sary Ny trano smrt dia mety ho hevitra iray feno alahelo, ary miovaova ny takian'ny mpanjifa ...
INDRO INDRINDRA INDRINDRA NY TANINDRAZANA? FIZARANA 2
Amin'ity indray mitoraka ity dia mampiditra hatrany ny plugs izahay. 6. TOSIKARATRA Arzantina: 220V Frequency: 50HZ Endri-javatra: Ny plug dia manana pin-tsipika roa amin'ny endrika V ary koa pin grounding. Misy kinova plug, izay tsy manana afa-tsy ny tsimatra indroa roa ihany koa. Ny plug Aostraliana dia miasa miaraka amin'ny faladiany any Shina ihany koa. 7.Australia TOSIKARATRA: 240V Frequency: 50HZ Endri-javatra: Ny plug dia manana tsimatra fisaka roa amin'ny endrika V ary koa pin grounding. Misy kinova plug, izay tsy manana afa-tsy ny tsimatra indroa roa ihany koa. Ny Au ...
Ahoana ny fomba hisafidianana loharano mando tsara biby ...